Hutano Kugara Kwekugadzira
Iwe ungangoda chigaro chekuchengetedza hutano.
Healthcare Seating Sarudzo
Kugara kwehutano kunoreva chero chigaro chekugara chakanyatsogadzirwa kusimudzira hutano hwakanaka uye chimiro. Vanhu vane kuremara ingangoda zvigaro zvehutano kudzivirira matambudziko eganda uye kugara kwakashata kwakaipa.
Iyi mhando yezvigaro inowanikwa kune vese varwere nevachengeti. Kune chigaro chekuchengetedza hutano chakanakira mamiriro ako kana mararamiro. Izvi zvinogona kusanganisira vanhu vanoshanda muhofisi nzvimbo uye vanhu vanogara vakagara panguva dzebasa.
Imwe mhando yezvigaro zvehutano imhando yaunoona pane yedu mavhiripu, iyo inogadzirwa zvakananga kudzivirira matambudziko ehutano uye nyaya dzine chekuita nehutano.
Chigaro chekurapa iri rimwe izwi rinowanzo shandiswa kureva nzvimbo dzekuchengetedza hutano. Iyi mhando yezvigaro inogona kunge iri ergonomic uye inokodzera mamiriro akakodzera uye pekugara.
Kugara kwekugadzira kwakakosha kune zvikonzero zvakawanda, chimwe chezvinhu zvechigaro dhizaini ndechekudzidzira hunyanzvi hwekufunda, kugadziridza kunosanganisira kudzidza iro basa idzva rekuzvikurudzira idzva wiricheya vhiri. Kuzvishingisa a wiricheya inogona kutora zvinopfuura kungokwanisa panyama kuzviita, kudzika-kwakadzika kudzidzisa kwakaratidza mibairo yakanaka neruzhinji rwe wiricheya vanoshandisa.
Chigaro chehutano kana chigaro chekurapa, chinofanirwa kuve chakagadzirwa neegonomics yakakodzera. Yedu S-Shape Seating System inopa akawanda mabhenefiti pamusoro peyakajairwa wiricheya yemawoko chigaro. Haingori chete kuti kumanikidzwa kunogoverwa zvakaenzana pamakumbo nekumashure, inopawo pekugara pakadzika uye inodzivirira kumberi kutsvedza.
Yedu patent seating system inobvumira chero mushandisi kugara akasununguka kwenguva yakareba asina kuona maronda.
Yedu ergonomic mavhiripu huya zvakajairwa nezvigaro zvedu zvepamutemo zvehutano.
Nderupi Rudzi rweHutano Hwekugara Zvandinoda?
Iwe ungangoda zvigaro zvakakosha zvezviitiko zvako zvezuva nezuva.
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve edu ehutano zvigaro.
Hutano Kugara Kwezvipatara, Lounge & Murwere: KI
Hutano Hwemberi: Inovhenekesa Chipatara & Medical Furniture: KI
Chigaro chekurapa - Herman Miller
HONI - Utano